Sababaha Ay Dadku Uga Reebaan Twitterka
Maxay Dadku Uga Reebaan Twitterka
Khamiis, May 31, 2012 Talaado, Maarso 1, 2016 Douglas Karr
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu qosolka badan infographics in DK New Media sameeyey ilaa maanta. Waxaan u sameynaa tan macluumaad ah oo loogu talagalay macaamiisheenna, laakiin markaan akhriyo maqaalka eConsultancy sababta ay dadku u raacayaan Twitter, waxaan isla markiiba u maleynayay inay ka dhigi karto macluumaad xiiso leh. Naqshadeeyahayaga sawir-qaadaha ayaa u gudbiyay wixii ka dambeeya riyadeenii ugu xiisaha badnayd
Miyaad aad ugu buuq badan tahay Twitter? Miyaad riixaysaa iib badan? Ma xishoonaysaa dadka? Mise waad iska caajisaysaa? Haddii aan hal eray ku soo wada koobo sababahan oo dhan, waa qiimaha. Haddii aadan kudarsaneynin qiimaha dhagaystayaashaada, kula joogi maayaan.
Adigoon ku sii fududaan, waa kuwan sababaha ugu sarreeya ee ay dadku kuu raacayaan Twitter-ka.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa eConsultancy oo fasax noo siisay isticmaal xogtooda si aad ugu qorto boostada!
Tags: suldaanimoinfographicka tag twittersababaha dadku u raacayaanTwitterTwitter infographicaanad lahaynsababaha aan la raacin twitter
Xayeysiinta Ciyaaraha Bulshadu ma shaqaysaa?
Badhanka Wadaagga Bulshada
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 7:02 AM
Jeclow kan, wuxuu sameyn doonaa biin weyn! Xaqiijin doonaa in la xuso halka ay ka timid.
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 9:10 AM
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 8:36 AM
Akhris xiiso leh. Dhibaatada warbaahinta bulshada ayaa ah in dadku ku mashquulaan cidda dabagal ku sameysa. Waxaan lahaa saaxiibo wanaagsan oo sidaas ku helay. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad naftaada khadka tooska ah kujirto oo hadaan dadku jeclayn markaa taasi waa go'aankooda. Ha beddelin naftaada si ay dadku kaaga daba joogaan. Si qaldan loogu sheego Lincoln, "Waad ka farxin kartaa dadka qaar markasta, iyo dadka oo dhan mararka qaar, laakiin waad ka farxin kartaa dadka oo dhan markasta."
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 10:37 AM
@ twitter-14119971: disqus waan ku raacsanahay gebi ahaanba, Corey! Waxaan joojiyay inaan ka walwalo inta qof ee i soo raacaya sanad ka hor waana wax cajiib ah. Xorriyadda !!!
Jun 1, 2012 saacadu markay ahayd 9:39 AM
Ganacsi ahaan, waxaa jira xariiq ganaax ah oo udhaxeeya wax ku oolnimada barta Twitter iyo xanaaqa. Waa duufsan inaad dhejiso dhowr jeer si aad uga gudubto dhammaan buuqa iyo jahwareerka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad taxaddar yeelato. Haddii aad ku soo baxdo quudinta isla farriinta isku mid ah kuwa raacsan ayaa kaa yeeri doona ama kaa saari doona.
Jun 1, 2012 at 5: 21 PM
Waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan ka fogaado waxa xun oo dhan. Ugh. Qeybta ugu badan, ma siinayo tan fiiro gaar ah waxa inta badan taageerayaasheyda ay tweet gareeyaan waxaa jira dad yar oo xiriiriyeyaal wanaagsan iyo waxyaabo halkaa ka wada laakiin intabadan waxay u isticmaalaan sidii wada hadal wanaagsan meelaha kale lagu yeelan lahaa. Waan nadiifiyaa liistadeyda waxaanan daadiyaa kuwa aan aniga i soo raacin haddii kale, meh. Aniga oo ah raaciddayda, haddii aan ku xadgudbo wixii la igu ogaa in aan sameeyo, markaa iga tag, laakiin ha iiga cunin arrintaas!
Jun 1, 2012 at 6: 14 PM
Jun 3, 2012 at 1: 40 PM
Midkaan waxaan ku darayaa boodhka suuqgeyga internetka. Waxaan ku raacsanahay inay adag tahay in la helo meel lagu farxo oo udhaxeysa “buuq badan” iyo wadaagida waxyaabaha ku habboon iyo xiisaha leh laakiin furaha dhabta ah ayaa ah in la dhiso kuwa raacsan oo si hufan u xiiseeya baahintaada iyo kicinta wada hadalada si dhab ah loola xiriiro dadka si ka baxsan “baahinta”. ”
Penguin Pete Trbovich
Jun 6, 2012 saacadu markay ahayd 2:21 AM
Soo bandhigida "waxyaabo aan u baahnayn inay noqdaan sawir-gacmeed", soo bandhigaan A.
Iyo hal qodob oo aan hoos loo soo sheegin: dadka adiga ku raacaya dhowr maalmood oo kaliya si ay u arkaan haddii aad dib ugala socon doontid iyaga dib. Taasi waxay u muuqataa inay tahay aqlabiyadda khibradeyda.
Jun 6, 2012 saacadu markay ahayd 2:40 AM
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay iyada oo aan u baahnayn inaan noqdo sawir-maskaxeed. Istaatistikadu been ma sheegto… Tani waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan noo soo gudbinta macluumaadka. Hadaan wax uun ka qori lahayn… Oh sug, waxaa LAGU qoray baloog ay qortay. Boostadaasina waxay heshay qayb yar oo ka mid ah xiisaha tan ay samaysay.
Ma jiraan sharciyo ku saabsan waxa ay tahay in la sameeyo ama aan laga dhigin qaab muuqaal ah. Sawir qosol leh oo si fiican loo sawiray ayaa si fiican u qaban kara. Ha u oggolaan fikirka caadiga ama kan dhaqameed inuu kaa joojiyo inaad tijaabiso wax shaqeynaya. Xaaladdan oo kale waxay u shaqeysay si cajiib ah.
PS: Auto DMs ayaa ku jira 😉
Jun 18, 2012 at 9: 13 PM
Waxaan dib uhelay tirakoobkii udiyaarsanaa 100% = 2270 codadka guud
Buuq badan (tweets inta badan) [12% - 271 votes]
Is-dhiirrigelin badan [11% - 249 votes]
Wax isdabamarin [11% - 245 votes]
Ma ahan wax xiiso leh oo ku filan [10% - 226 votes]
Ku celcelin aad u badan [7% - 152 votes]
Qalabaynta aad u tiro badan [7% - 151 votes]
Weerar / xirfad la'aan [6% - 146 votes]
Aad u tiro badan 'tweets tuugsiga' [6% - 145 votes]
Aamusnaan badan [6% - 141 votes]
Ku xadgudbayaasha laba-geesoodka ah ama kuwa soo galaya [5% - 115 votes]
Ma jiro tweets wada hadal [5% - 108 votes]
Dembiyada ka dhanka ah naxwaha [4% - 93 votes]
Reweets aad u tiro badan [4% - 90 votes]
Xadgudubka otomaatiga / DM [4% - 86 codadka]
Ku xadgudbayaasha Hashtag [2% - 52 codadka]
hada waan sii wadan karaa tweet ga… 😉
Jun 18, 2012 at 10: 09 PM
Sida aan kor ku sheegay, arintu sidaas maahan. Midda hore, sahanku waa sahan furan qofkuna wuu geli karaa inta jeer ee uu doono. Marka labaad, waxay bixin karaan wax ka badan hal mar. Fadlan fiiri sahanka: http://twtpoll.com/un5lxe
Jun 18, 2012 at 9: 15 PM
marka wadarta guud ee boqolleyda oo dhan waxay gaarayaan 435% ??? waan ka xumahay, runtii ma helin tan… laga yaabee qofkii sidan sameeyay inuu bartay 100% naqshad iyo 0% xisaab?
Jun 18, 2012 at 10: 07 PM
Elena, waxaad u maleyneysaa in jawaab-bixiyeyaashu ay bixin karaan oo keliya hal jawaab halkii sahan. Arrintu sidaas maahan.
May 16, 2014 at 4: 00 PM
Ma wada farxi kartid dadka oo dhan markasta. Waxaa jira 3 qaab oo kala duwan oo dadku u adeegsadaan Twitter-ka oo aad u kala duwan. Qaarkood waxay u isticmaalaan sida waa sheeko gaar loo leeyahay. Kuwa kale ee ila midka ahi waxay u isticmaalaan inay ku wadaagaan macluumaad badan oo tayo leh. Kuwa aan jeclayn mugga sare maahan kuwa aan bartilmaameedsanayo. Xitaa haddii aanan wax badan wadaagin, sheekaysiga 'Twitter' ee aan ka qaybqaato ayaa kaxayn doona iyaga. Mid walbaa u gaar ah.
May 16, 2014 at 4: 02 PM
@Nick Stamoulis waan ogolahay. Habka ugu fiican ee wax loola wadaago wax ka badan hal jeer waa in la sameeyo tweet kasta oo u gaar ah si aanad qofna uga caajisin. Taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad fariintaada gaarsiiso waana inaad badisaa qasabadaha.